Tag: moz obodo | Martech Zone
Tag: moz obodo
Dika otutu ndi mmadu muta ma chota ulo oru ndi di na ntaneti, odi ike na ntaneti di nkpa. Ezigbo ozi gbasara azụmahịa, foto dị mma, mmelite kachasị ọhụrụ, yana nzaghachi maka nyocha na-enyere ndị mmadụ aka ịmụtakwu banyere azụmahịa gị ma na-ekpebi ma ha họọrọ ịzụta n'aka gị ma ọ bụ onye asọmpi gị. Ndepụta ndepụta, mgbe ejikọtara ya na njikwa aha, nwere ike inyere azụmaahịa mpaghara aka melite nnabata na aha ha n'ịntanetị site na enyere ha aka ijikwa ụfọdụ n'ime
Ndị Ntị Na-ege Ntị: Rlọ ahịa na-enweta nyocha ndị ọzọ karịa ụlọ oriri na ọuụrantsụ na Yelp
Na-anụ TripAdvisor, ị na-eche hotels. Na-anụ Healthgrades, ị chere na ndị dọkịta. You na-anụ Yelp, na Ohere dị mma na ị chere ụlọ nri. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe kpatara na ọ bụ ihe ijuanya nye ọtụtụ ndị nwe ụlọ ahịa na ndị na-ere ahịa ka ha gụọ ọnụọgụ nke Yelp nke na-ekwu na, nke nde nde nde nde iri abụọ na ise ndị Yelpers hapụrụ kemgbe mmalite, 115% metụtara ịzụ ahịa vs. 22% metụtara ụlọ nri. Retail aha, mgbe ahụ, mejupụtara akụkụ kachasị nke